“အိနြေ္ဒရှင် မိန်းကလေးတွေ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “အိနြေ္ဒရှင် မိန်းကလေးတွေ”
Posted by ET on Oct 4, 2011 in Creative Writing | 14 comments
(အိနြေ္ဒ) ဆိုသော စကားသည်အလွန်အဖိုးတန်လှဧ။်။
(အိနြေ္ဒ) ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားတာနဲ့ ပိုင်ရှင်သည်
*ယောကျာင်္းလေးလား မိန်းကလေးလားဆိုတာ *
*မိန်းကလေး* ဆိုတာ လူတိုင်း အသိပင်ဖြစ်ပါသည်။
မိန်းမတို့ဧ။် (အိနြေ္ဒ) ကို စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းဖို့ရာ အထူးလိုအပ်ပါသည်။
အပျို မိန်းကလေးများဧ။် ကိုယ်ကျင့်တရား(၇)ပါးကို
1. အရှက်အကြောက် ရှိရမည်။
2. ရတနာသုံးပါး အတွက် နေ့ညမပျက် ဆောင်ရွက် အားထုတ်ရမည်။
3. မိဘ၊ မောင်ဘွားကို အထူး ရိုသေလေးစားရမည်။
4. မိခင်အလုပ် (အိမ်မှုကိစ္စ) ဟူသမျှကို တတ်ကျွမ်းကူညီနိုင်ရပါမည်။
5. အတတ်ပညာ သင်ကြားခြင်းတို့ကို ပျင်းရိတွန့်တိုသော
စိတ်ကို မထားဘဲ ၊ထကြွ လုံလ္လ ၀ီရီယရှိရပါမည်။
6. ဆွေမျိုး၊မိတ်သင်္ဂဟ တို့ဧ။် ၀တ္တရားကို နားလည်ရမည်။
7. (အိနြေ္ဒ) ၆ ပါး ကိုရိုသေစောင့်ထိန်းရမည်။
ကဲ ! သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနှင့် မိန်းကလေးတို့ရေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စမ်းစစ်ကြည့်ကြပါအုံး။
ငါတို့ ဘယ်နှစ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီလဲဆိုတာကို ပေါ့။ မိဘတွေ အနေနဲ့လဲ
မိမိတို့ သားသမီးတွေကို ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ပါ။
ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ လွတ်မထားပါနဲ့။ မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာ ကင်းကွာလွန်းရင် ဝေးလွန်းသွားရင်
*အဆိုးဘက်* ကိုဦးတည်လာလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးအပျိုမတို့ရေ လမ်းမှားမရောက်ခင် တစ်ပါးသူတို့ ရဲ့ကဲ့ရဲ့မှု နဲ့ နှလုံးနာခြင်းကို မခံဘဲ
ချီးမွှမ်းချီးမြှောက်သံတွေကို အမြန်ဆုံး လက်ဝယ်ရောက်အောင် ယူလိုက်ကြပါတော့။
မိမိတစ်ယောက် အတွက်နဲ့ မိဘ မောင်နှစ်မတွေ လူသူကြားမှာ မျက်နှာမလှ ၊ မျက်နှာမပျက်
ရအောင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ က္ကုနြေရှင် မိန်းမလှလေးတွေ ဖြစ်ဖို့ ထက်မြတ်တဲ့
မြန်မာမိန်းမလှလေးတွေ အဖြစ်နဲ့ ကမ္ဘာအလယ်မှာ တင့်တယ်အောင် နေပြလိုက်ကြရအောင်လို့ ဖော်ပြရင်း။
View all posts by ET →
<<< ရေချိုးခန်းတို့ အိမ်သာ ၀င်တဲ့ အခါတို့ကျတော့ရော
<<< ဘာသာခြားတွေ အတွက် ဘာတွေများ နေ့ညမပျက် ဆောင်ရွက်အားထုတ်ရမလဲနော်
<<< ဒါကတော့ အထူးတလည် ပြောစရာမရှိဘူး … အချုိးပြေပြေနေမှ မုန့် ဖိုး ရမှာကိုး ..
<<< အိမ်မှုကိစ္စ ကိစ္စနိုင်နင်းပါတယ် … တစ်ခါတစ်လေ …အမြဲတစေ ပန်းကန်လေး ခွက်လေးကျကွဲတာလောက်ပါ
စိတ်ကို မထားဘဲ ၊ထကြွ လုံလ္လ ၀ီရီယရှိရပါမည်
<<< စာသင်ချင်စိတ်လည်း တတ်ကြွပါရဲ့ .. စာမသင်ရချိန်ကတည်းက ကကြီးခခွေး အော်အော်ဆိုနေတာ အဟီး
<<< နားလည်လွန်းလို့ .. အိမ်မလာကြနဲ့ ပြောထားတယ် … (ကိုယ့်အိမ်ကဟာတွေလာစားမှာစိုးလို့ ) …အဲ … သူတို့ လာလည်လျှင် ခြေထောက်ညောင်းမှာ စိုးလို့
<<< အိပ်နေတဲ့ အချိန် စောင့်ထိန်းတယ်
(၁) ကပ်သပ်ပြီး ပြောရင် ဘာမဆိုပြောလို့ရပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ
creative writing ဆိုတော့ ပို့စ်ထဲမှာပါတဲ့ အချက်၆ချက်က ET ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိုင်ဒီယာတွေပေါ့။ လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ နည်းနည်းများအံချော်နေသလားဘဲ။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ တရားသဘောနဲ့ပြောရရင် အလယ်အလတ်မကျဘဲ အစွန်းနည်းနည်းရောက်နေသလားလို့။
အခုခေတ်မှာက မိဘအုပ်ထိန်းသူနဲ့ခွဲခွာပြီး တစ်မြို့တစ်နယ်တွေမှာ ပညာရှာပြီး စီးပွားရေး
လုပ်ကိုင်နေသူအများကြီးပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းနေထိုင်တဲ့သူရှိသလို၊ အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့ သူတွေလည်းဒုနဲ့ဒေးပါ။
ခေတ်မှီတယ်ဆိုပြီး ပျက်စီးနေကြတာများလာတာကို မြင်တွေမိရလို့သာရေးမိသာပါ။
If I findalady to marry ( for me ),
I will care only (3) things,
(1) Good Heart
(2) Reasonable Intelligent
(3) My love upon her & Her love upon me.
1. အရှက်အကြောက် ရှိရမည်။ ( just acceptable/moderately is OK )
2. ရတနာသုံးပါး အတွက် နေ့ညမပျက် ဆောင်ရွက် အားထုတ်ရမည်။ ( No need )
3. မိဘ၊ မောင်ဘွားကို အထူး ရိုသေလေးစားရမည်။ ( just acceptable/moderately is OK )
4. မိခင်အလုပ် (အိမ်မှုကိစ္စ) ဟူသမျှကို တတ်ကျွမ်းကူညီနိုင်ရပါမည်။ ( No need, if you can findalotfmoney or if you havealot of money, you can hireamaid )
5. အတတ်ပညာ သင်ကြားခြင်းတို့ကို ပျင်းရိတွန့်တိုသောစိတ်ကို မထားဘဲ ၊ထကြွ လုံလ္လ ၀ီရီယရှိရပါမည် ( Generally agree, but, if you havealot of money, no need)
6. ဆွေမျိုး၊မိတ်သင်္ဂဟ တို့ဧ။် ၀တ္တရားကို နားလည်ရမည်။ ( No need, I don’t care )
7. (အိနြေ္ဒ) ၆ ပါး ကိုရိုသေစောင့်ထိန်းရမည်။ ( I don’t know အိနြေ္ဒ ၆ ပါး )
I really see eye to eye with you despite the different age. I’m in favour with your
issues in brackets for (5) points except No.2 which I would like to add ( necessary to some extent). For No.7 (က္ကုနြေ္ဒ ၆ပါး), however, Myanmar girls should refrain from doing something improper in Asian ways of living.
Firstly,Thanks for your comments.
In fact, I am Myanmar & I am Buddhist.
So, I can understand & accept မိန်းမတို့ဧ။် (အိနြေ္ဒ) ( in certain extent ).
But, you may realize,
Especially, in this ever rushing & competing Era,
we cannot construct or develop our country with this type of ( slow respond ) အိနြေ္ဒရှင် alone.
” မိန်းမတို့ဧ။် (အိနြေ္ဒ) ကို စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းဖို့ရာ အထူးလိုအပ်ပါသည် ”
I think, It is too much ( extreme ).
Our country need the lady who can compete ( even fight ) with men, in both physically & mentally.
Our country need the lady of more intelligent, self motivated & strong will.
Our country will be quite happy to have ” Madame Curie ” without အိနြေ္ဒ .
( She was the first person honored with two Nobel Prizes in physics and chemistry )
ကို FR ရေ
မြန်မာနိုင်ငံက ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းကြပါတယ်။ သူ့အချိန်အခါလေးနဲ့တော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ။်
အိမ်ထောင်ကျမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံရှိလို့ကတော့ home maid ကိုဌားရမ်းနိုင်တာပေါ့။
အခုကျနေ်ာဖော်ပြထားတာတွေက အခုခေတ်အမြင်နဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ကွာဟချက်ဖော်ပြပြီးရေးလိုက်မိတာပါ။
ဒါနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ High school ကျောင်းမှာ မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားကလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကကောဘယ်လိုလဲမသိဘူး
မိန်းမတို့ဧ။် အိနြေ္ဒ ရွှေပေးလို့မရတဲ့
ဒီခေတ်မှာ bus ကားစီးလို့တောင် ရမှာမဟုတ်ဘူး အဟင့်
“7. (အိနြေ္ဒ) ၆ ပါး ကိုရိုသေစောင့်ထိန်းရမည်။”
ဘာကြောင့် စောင့်ထိမ်းရမည် ဆိုသည်ကို သိလိုပါသည်။
အပေါ်က ခြောက်ပါးကိုပြောတာလို့ .. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အော်တို မစ်တစ် နားလည်လိုက်သည်
အော် ပို.စ်တင်တဲ့သူကတော့ စေတနာနဲ. မိန်းကလေးတွေအတွက် တင်ပေးတာထင်ပါတယ်..
အဲဒါကို ၀ိုင်းပြီး ဟားနေကျသလား ထင်မိတယ်…
ဘာပဲပြောပြော အိနြေ္ဒဆိုတာတော့ ရှိသင့်ပါတယ်.. ခေတ်နဲ.အညီ အ၀တ်အစားဝတ် တာလဲ အိနြေ္ဒရရ ၀တ်လဲရပါတယ်.. ဥပမာ မိန်းကလေးဆို ရင် ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်၊တီရှပ် ကိုယ်ကျပ်လေးနဲ.ဆို ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခေတ်နဲ.အညီကြည့်ကောင်းမှာပါပဲ…
ဘာပဲပြောပြော ခေတ် အိနြေ္ဒလေးနဲ. နေကြပေါ့ဗျာ….
post လေးကတကယ်ကောင်းပါတယ်။ ခုခေတ်မှာ ဒီလိုမိန်းကလေးက တကယ်ကို ရှားပါတယ်။